Naqshad Cilmi-baaris ah waxa Maxay Taas u Falanqeeyeen SEO
Inta badan ganacsatada iyo raadiyayaasha wax-ka-beddelayaasha ayaa aaminsanin aad noqon karto liiska blacklist Google haddii aad soo gasho keywords dhowr keydka boggaaga. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka ayaa u maleynaya in qayb ka mid ahmaadada waxay kuxiran kartaa sare ee matoorada raadinta haddii la wadaago dhowr jeer. Kuwani waa runta marin habaabinta. Faahfaahinta ereyga maahan mid degdeg ah Googlesi aad u hesho liiska madaw. Inkasta oo ay jiraan xiriir is-waydaarsi ah haddii macluumaadka badanaa la wadaago warbaahinta bulshadaXiriiro badan oo soo galaya, Google ayaa si joogta ah u diiddan in saamiyada bulshada ay kaalin ka ciyaaraan kartida liiska. Sidaa darteed, sheegashada in badannatiijooyinka saamiga ku sarraysa ayaa ka sarreeya xaqiiqada kalifta iyo xaqiiqda marin habaabinta.
Jack Miller, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare ,sharrax sababta ficil-xumadu u socoto si aad ah ugu faafinayso maalmaha SEO-ga iyo sida looga fogaado dhaqankaaga.
Waxaa jira suurtogalnimada in runtu ka sarrayso xaqiiqooyinka kala duwan si ay u socdaan halkii ay ka ahaan lahaayeenkhuraafaadka qeexan. Khuraafaadka iyo fikradaha khaldadka ah waxaa caadi ahaan loo qaataa kuwa ka baxsan warshadaha. Dhinaca kale, warshadaha SEO waawaxaa lagu qosliyay xaqiiqooyin kala duwan tan iyo inta badan kiisaska aan la shaqaynin xaqiiqooyin toos ah. Xaqiiqda ah in algorithms dhamaan matoorada searchoo ay ku jirto Google waa sirta sarreeya, waxay tusineysaa in aysan sheegi karin waxa ay u tixgeliyaan inta lagu jiro natiijada natiijooyinka laakiin waxay kaliya oo kaliyasiiyaan sheekooyin. Sidoo kale, feker ayaa si fudud loo aqbalaa haddii ay u muuqato mid macquul ah..Tusaale ahaan, waxyaabaha leh saamiyo badan oo bulshada ah ayaa sarreeyafursadaha ay ku helayaan isku-xireyaasha xiriirka ah, laakiin laga yaabo in aysan aheyn wadaagista warbaahinta bulshada oo fulinaysa shaqada. Sidaa awgeed, iyada oo ku saleysan tilmaamaha habboonin aan wax ka qabanno saamiyada bulshada, waa xaqiiqo nus ah oo fudud in la oggolaado.
Nidaamka degdegga ah ee warshadaha SEO wuxuu keenaa kor u kac ku yimaada xogta.Inkastoo Google uu la qabsanayo jadwalka sii deynta oo joogto ah, kor u kaca, bixinta tiknoolajiyada cusub iyo qaababka raadinta ayaa sameeyaadagtahay raadiyaha wax-ka-qabadka si ay u qabsadaan. Tani waxay leedahay saameyn kala duwan oo ku saabsan faafinta xogta sida saxda hore ee saxda ahwaxay si fudud u noqon kartaa mid aan dib loo dhigin, dadka badiyaa waxay keenaan macluumaad aan ku filneyn oo isku day ah in ay noqdaan kuwa ugu horreeya si ay u daboolaan sheeko raadinama cusboonaysiin dhow. Fahminta macluumaadka ku saabsan qodobbada waa muhiim, laakiin fikradda degdegga ah waxay keeni kartaa ismaandhaaf ah waxa uu yahaydhab ahaantii dhacaya. Ugu dambeyntii, xawaare degdeg ah, macluumaad xun ayaa lagu faafin karaa waqti gaaban waxayna noqon kartaa waqti dambe si loo saxomarkii ay heleen bulshada.
Sidee looga fogaan la'aanta xogta
Tixraacyo tixraac ah. Had iyo jeer isbarbardhig macluumaadka ilaha kala duwan.Hubi haddii ilaha kale ay leeyihiin xogta xaqiijinaysa macluumaadka ilaha hadda jira.
fiiri cadeyn adag. Haddii warbixintu bixiso macluumaad guud,tusaale ahaan, raadi xogta tirakoobka, xaqiiqda, iyo tirooyinka kuwaas oo si fudud u heli kara shirkado kale
Hubi ilahaaga. Tusaale ahaan, haddii qof si khaas ah u siiyoMacluumaad ku saabsan xeeladaha SEO, waxay noqon doontaa mid sax ah haddii aad ka raadsato isla qof ka mid ah xirfad ku leh SEO
Ka soo horjeeda fikradahaaga Source . Isku day in aad diidid qaar ka mid ahcaqiidooyinka si ay ugu dhawaadaan runta kama dambaysta ah